Turkiga oo kordhinayo Xajmiga ganacsiga xariir uu la leeyahay dalka Mozambiqwe!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Turkiga oo kordhinayo Xajmiga ganacsiga xariir uu la leeyahay dalka Mozambiqwe!!
Turkiga oo kordhinayo Xajmiga ganacsiga xariir uu la leeyahay dalka Mozambiqwe!!
Madaxweynaha Turkiga Rajab Dayib Erdogaan ayaa sheegay inuu dalkiisu ku horumarin doono iskaashig dhinaca Ganacsiga ah ee uu la leeyahay dalka Mozambiqwe gaarsiin doonana ilaa 500 milyan oo Dollar.
Wuxuuna sheegay in xajmiga Ganacsiga ee Turkiga iyo Mozambiqwe Sanadkii tagay ee 2016-kii oo dhamaa $ 103 milyan, haatana la gaarsiin doono $ 500 milyan.
Rajab Dayib Erdogaan ayaa hadalkan ka sheegay shir Jara’id oo ay si wada jir ah ugu qaabteen Caasimadda Mozambiqwe ee Maputo dhigiisa dalkaasi, isagoo ku jira booqasho uu ku marayo dhawr dal oo ka tirsan wadamada Bariga Afrika, horayna u soo maray dalka Tanzania.
Madaxweynaha Turkiga Rajab Dayib Erdogaan, wuxuu kaloo shirkiisaasi Jara’id ku sheegay inuu dalka Mozambiqwe ka saacidi doono dhinaca horumarinta Tamarta iyadoo safarkiisa ayna ku wehliyaan 150 wakiilo oo ka kala socoday qeybaha kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha dalka Turkiga kuwaa oo wada hadallo la yeelan doonaan Ganacsatada dalka Mozambiqwe.
Previous PostMUUQAAL: Barnaamij Xiiso leh oo lagu soo bandhigay Danaha ay Soomaliya ka Leeyihiin Dalalka ku haya Faragelintu!! Next PostWar Deg Deg ah:- ku dhawaad 100 Ruux oo laga soo Masaafuriyay Mareykanka oo Muqdisho laga soo dejiyay!!